Garsoore ka tirsanaa Maxkamadda Racfaanka oo maanta lagu dilay Bossaso. – Radio Daljir
Garsoore ka tirsanaa Maxkamadda Racfaanka oo maanta lagu dilay Bossaso.
Seteembar 14, 2011 12:00 b 0
Bossaso, Sep 14 – Allaha u naxariistee waxaa duhurnimadii maanta lagu dilay magaalada Bossaso Garsoore C/naasir Xaaji Aadan oo ka tirsanaa Maxmadda Racfaanka ee gobolka Bari, kaas oo lagu toogtay iridda hore ee maxkamadda.
Dilka Marxuunka ayaa waxaa geystay nin baskoolad ku hubaysan kaas oo la sheegayo in ciidanka booliska ay qabteen hadana lagu hayo saldhigga dhexe ee magaalada Bossaso.
Ma cadda sababta dilka loo geystay, mana jiro ilaa iyo hadda war rasmi ah oo la xiriira arrintaas oo ka soo baxay dawladda Puntland.
?Ma ahan macquul, waana xad-dhaaf sida ay warbaahintu u xayaysiiso caanaha laga keeno dalka dibadiisa, waa in la xayaysiiyaa caanaha naaska hooyada? Dr. Cali C. Warsame.
Baahin: Isniin, Sept 12, Weriye Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Ciidanka dawlada federaalka ah oo dib u qabsaday Ceel-waaq; Kenya oo lagu eedeeyey faragelin ay ka wado gobolka Gedo; Gen. Ilkajiir oo tafaasiil ka bixiyey qorshaha horumarineed ee dawladaha hoose ee gobollada Puntland; Wasiirka warfaafinta ee Puntland oo tafaasiil ka bixiyey shir ay xukuumada ku gorfaysay amniga gobollada.